I-Tokio Blues: "ulingelo" olwafaka umsebenzi kaHaruki Murakami | Uncwadi lwangoku
IiTokyo Blues (1987) yinoveli yesihlanu ngumbhali waseJapan uHaruki Murakami. Ngexesha lokukhutshwa kwayo, umbhali waseJapan wayengaziwa kwilizwe lokupapasha kwaye wayebonise isimbo esahlukileyo kwiimpapasho zakhe zangaphambili. Ngaphezu koko, yena ngokwakhe wayecinga ngalo mbhalo njengohlobo lovavanyo olunjongo zalo yayikukujonga imiba enzulu ngendlela elula.
Umphumo waba Ibali elikwaziyo ukunxibelelana nabantu bayo yonke iminyaka, ngakumbi abaphulaphuli abancinci. Ngapha koko, zingaphezulu kwezigidi ezine iikopi ze IiTokyo Blues. Yiyo loo nto yaba sisihloko sokungcwaliswa kombhali waseJapan, ophumelele amabhaso amaninzi ukusukela ngoko. Ukongeza, igama lakhe liyaqhubeka nokuba ngumgqatswa kwiBhaso likaNobel kuLwazi loncwadi.
1 Isishwankathelo seTokyo Blues
1.2 Ubuhlobo nentlekele
1.3 Ukudibana kwakhona
2 I-Tokyo blues, ngamazwi kaMurakami
3 Amabinzana alishumi e-Tokyo blues
4 Malunga nombhali, uHaruki Murakami
4.1 Intshayelelo yombhali wexesha elizayo
4.2 Ukunyuka kombhali othengisa kakhulu
5 Isitayile kunye nembono yoncwadi loncwadi lukaHaruki Murakami
5.1 Ukuphindaphinda, ukunyaniseka kwemilingo, i-oneirism ... okanye umxube wazo zonke?
5.2 Ubunye bukaMurakamian
5.3 Kutheni le nto ingxelo kaMurakamian ivelisa intiyo engaka?
6 Iincwadi ezi-5 ezithengiswa kakhulu eMurakami
Isishwankathelo se IiTokyo Blues
Ukuqala kwencwadi kwazisa UToru Watanabe, Indoda eneminyaka engama-37 ikhutshiwe yangena kwinqwelomoya (ehla) xa mamela ingoma ekhethekileyo. Esi siqwenga - "Umthi waseNorway", liqela elidumileyo lesiNgesi iBeatles— imvuse baninzi iinkumbulo zobutsha bakhe (ukusukela ngexesha lakhe njengomfundi waseyunivesithi).
Ngale ndlela ibali lihamba liye kwisixeko saseTokyo ngee-1960s. Ngelo xesha, iziganeko eziphazamisayo zenzeka kwihlabathi liphela ngenxa yemfazwe ebandayo kunye nemizabalazo eyahlukeneyo yoluntu. Okwangoku, UWatanabe uxelela iinkcukacha zokuhlala kwakhe kwikomkhulu AmaJapan aneemvakalelo ezivakalayo zokungazinzi kunye nesizungu.
Njengoko ibali liqhubeka, umlinganiswa ophambili ukhumbula iinkcukacha malunga amava eyunivesithi, mculo mni awumameleyo nobuntu obungaqhelekanga babanye asebenza nabo. Ngokufanayo, Watanabe ngokukhawuleza ubhekisa kubathandi bakhe kunye namava abo ezesondo. Emva koko, uchaza uthando awayenalo ngoKizuki, umhlobo wakhe osenyongweni ukusukela ebusheni, kunye noNaoko, intombi yakhe.
Ngale ndlela, ubomi obuqhelekileyo bemihla ngemihla buyadlula (imvakalelo ebangelwa lulwimi olusondeleyo nolusondeleyo lwengxelo ...). kude kube kwehla intlekele ebomini kwaye uphawula i-psyche yabalinganiswa ngonaphakade: UKizuki uzibulala. Kwimizamo yakho yokoyisa ilahleko eyoyikekayo, UToru ugqiba kwelokuba abaleke kuNaoko unyaka wonke.
UNaoko noToru badibana kwakhona eyunivesithi emva kwexesha lokuzihlukanisa. A) Ewe, Kwavela ubuhlobo bokwenyani obanikezela umtsalane ongenakuphepheka kumaqabane. Kodwa, usabonisa iimpawu zengqondo ebuthathaka, ngenxa yoko, kuye kwafuneka ajongane nobunzima bexesha elidlulileyo. Ngale ndlela, le ntokazi yangeniswa kwiziko lokufumana uncedo lwengqondo kunye nokuphumla.
Ukuzibandakanya kukaNaoko kwandise imvakalelo yokuba lilolo kukaWatanabe, ngenxa yesi sizathu, waqala ukubonisa iimpawu zobukho obungalunganga. Kamva, wayecinga ukuba uthandana noMidori, enye intombazana ebikhonza ukunciphisa iintlungu zayo okwethutyana. Ke, UToru wagutyungelwa yinkanuko yesini, isini kunye nokungazinzi ukuziva uzivalele ngaphakathi kwabasetyhini ababini.
Ukuphuhliswa kweziganeko ngokungathandabuzekiyo kutyhala umlinganiswa ophambili kuhlobo lokucinga okunzulu ngemilinganiselo efana nephupha. Kule meko, akunakwenzeka ukwahlula ngokucacileyo ukuba zeziphi iinyani okanye izinto eziyinyani kwaye ziintoni ezicingayo. Ekugqibeleni, uzinzo olunqwenelekayo lunokwenzeka kuphela xa ophambili ekwazi ukukhula ngaphakathi.
Iimpawu zeTokyo, kumagama kaMurakami
Kudliwanondlebe kunye El País (2007) waseSpain, UMurakami wachaza ngokunxulumene ne "experiment" IiTokyo Blues, Okulandelayo: "Andinamdla wokubhala iinoveli ezinde ezinesimbo esifanelekileyo, kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba, ukuba kube kanye kuphela, ndiza kubhala inoveli eyiyo. " Umbhali wase-Japani wongeze ukuba akaqhele ukufunda iincwadi zakhe emva kokuba zipapashiwe, kuba akanazincamathiselo kwimicimbi yexesha elidlulileyo.
Emva kwexesha, kudliwanondlebe olwenziwe nguXavier Ayén (2014), uMurakami wachaza ukudibana kwakhe nabalinganiswa abaneengxaki zengqondo. Ngokubhekisele koku, wathi: “Sonke sineengxaki zethu zengqondo, esinokuthi ngamanye amaxesha sizigcine singazi, ngaphandle kokuvela ngaphezulu. Kodwa sonke singabasemzini, sonke siyaphambana "...
Amabinzana alishumi e Iimpawu zeTokyo
"Xa ujikelezwe bubumnyama, ekuphela kwento onokuyenza kukuhlala ungashukumi de amehlo akho aqhelane nobumnyama."
"Into esenza ukuba sibe ngabantu abaqhelekileyo kukwazi ukuba asiqhelekanga."
"Ungazisizeli. Ngabantu abaphakathi kuphela abenza loo nto ”.
"Ukuba ndifunda ngokufanayo nabanye, bendizakuphela ndicinga njengabo."
"Ukufa akuchasani nobomi, ukufa kuyabandakanywa ebomini bethu."
Akukho mntu uyithandayo isithukuthezi. Kodwa andinamdla wokwenza izihlobo nangayiphi na indlela ”.
"Ngaba akukho emzimbeni wam uhlobo lwe-limbo yememori apho zonke iinkumbulo ezibalulekileyo ziqokelela zize zitshintshele eludakeni?"
"Oko kuyenzeka kuwe kuba kunika umbono wokuba awukhathali ngokuthandwa ngabanye."
Indoda efunde kathathu Igatsby enkulu ingangumhlobo wam ”.
"Abona bantu babelusizi babhomboloza okanye basebeza, kuxhomekeka ukuba umoya uvuthuza phi na."
Malunga nombhali, uHaruki Murakami
Umbhali waseJapan owaziwayo kwihlabathi namhlanje wazalelwa eKyoto ngoJanuwari 12, 1949. Uyinzala yemonki yaseBuddha kunye nomntwana ekuphela kwakhe. Abazali bakhe, uMiyuki noChiaki Murakami, babengabahlohli boNcwadi. Ngesi sizathu, uHaruki omncinci Wakhula engqongwe yimeko-bume yenkcubeko, noncwadi oluninzi oluvela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi (ngokudibeneyo neJapan).
Ngokufanayo, umculo weAnglo-Saxon wawungumcimbi oqhelekileyo kwikhaya lakwaMurakami. Ukufikelela kwinqanaba lokuba umculo kunye nefuthe loncwadi lwamazwe aseNtshona luphawu lokubhalwa kukaMurakamian. Kamva, umfana Haruki ukhethe ukufunda i-theatre kunye nesiGrike kwiYunivesithi yaseWaseda, yenye yezona zibalulekileyo eJapan. Apho wadibana khona namhlanje ngubani umfazi wakhe, uYoko.
Intshayelelo yombhali wexesha elizayo
Ngexesha lakhe njengomfundi waseyunivesithi, UMurakami wayesebenza kwivenkile yomculo (iirekhodi ze-vinyl) kunye neetafile zejazz "Uhlobo lomculo aluthandayo." Ukusuka kuloo ncasa kwavela ukuba ngo-1974 (kude kube ngo-1981) wagqiba kwelokuba aqeshe indawo ukuze amise ibar yejazz kunye nenkosikazi yakhe; bambhaptiza "Peter Cat." Esi sibini sagqiba ekubeni singabi nabantwana ngenxa yokungathembani kwabo kwisizukulwana esilandelayo.
Ukunyuka kombhali othengisa kakhulu
Ngo-1978, uHaruki Murakami wamitha uluvo lwe ube ngumbhali ngexesha lomdlalo webhola. Kunyaka olandelayo waphosa Yivani ingoma yomoya (1979), inoveli yakhe yokuqala. Ukusukela loo minyaka mihlanu, umbhali waseJapan uqhubeke nokwenza amabali kunye nabalinganiswa abothusayo kwiimeko ezithile eziphazamisayo.
UMurakami wayehlala eUnited States phakathi ko-1986 no-1995. Okwangoku, ukumiliselwa kwe Umthi waseNorway —Elinye igama lesihloko IiTokyo Blues- uphawule ukusuka kwinqanaba lomsebenzi wakhe wokubhala. Nangona amabali akhe enconywa zizigidi zabalandeli kumazwekazi amahlanu, akazange akhululwe ekugxekweni okungqongqo.
Isitayile kunye nembono yoncwadi loncwadi lukaHaruki Murakami
Ukuphindaphinda, ukunyaniseka kwemilingo, i-oneirism ... okanye umxube wazo zonke?
Umsebenzi wombhali kwilizwe ekuphumeni kwelanga ushiya nabani na ngabandayo. Nokuba ngabagxeki boncwadi, abahlalutyi bezemfundo okanye abafundi, ukukhulelwa kwendalo iphela kweMurakamian kuvusa ukubabazeka okanye intiyo engaqhelekanga. Oko kukuthi, kubonakala ngathi akukho manqaku aphakathi xa kuvavanywa umsebenzi kaMurakami. Kutheni le nto (pre) isigwebo silungile?
Kwelinye icala, UMurakami Ukhulelwa ukubhala ngenjongo yokuba Ungabinangqiqo, ngenxa yokuzibophelela kwakhe okungenakuphikiswa kwihlabathi lamaphupha. Ngenxa yoko, useto olunqabileyo olwenziwe ngamaJapan lusondela kakhulu kwingxelo ye-surreal. Ukwengeza, i-aesthetics, abanye abalinganiswa kunye nezixhobo zoncwadi gcina mucha ukufana neemilo ze ubunyani bomlingo.
Iingcamango, i-atmospheres efana nephupha kunye neendawo ezihambelanayo zizinto eziqhelekileyo kwingxelo kaMurakami.. Nangona kunjalo, akukho lula ukuyichaza ngaphakathi kwinqanaba elithile, kuba kumabali abo okusingqongileyo kunye nexesha zihlala zisombulula okanye zigqwetha. Olu deformation lwenyani lunokwenzeka kwimeko yokukhohlisa okanye ngaphakathi kweengqondo zabalinganiswa.
Kutheni le nto ingxelo kaMurakamian ivelisa intiyo engaka?
UMurakami, njengabo bonke abantu abathengisa kakhulu- uDan Brown okanye uPaulo Coelho, umzekelo-, Utyholwa "ngokuphindaphinda kunye nabalinganiswa bakhe kunye neerekhodi." Ukongeza, abagxeki kuncwadi lwaseAsia bachaza ukuba ukungabikho okuphindaphindiweyo kwemida phakathi kokucinga kunye nokwenyani kuphele kudida (ngokungeyomfuneko?) Umfundi.
kunjalo, Uninzi lweempazamo zikaMurakami zibonwa njengeyona nto intle yimikhosi yabalandeli kunye namazwi ayithandayo indlela yakhe yoqobo yokubalisa amabali. Zonke iimpawu ezikhankanyiweyo ngokubhekisele kwingxelo elayishwe nge-surreal, izinto ezinamaphupha kunye nefantasy nazo ziyaqapheleka IiTokyo Blues.
Iincwadi ezi-5 ezithengiswa kakhulu eMurakami
IiTokyo Blues (1987)
Ingxelo yentaka ejikeleza umhlaba (1997)
Sputnik, sithandwa sam (1999)
Kafka elunxwemeni (2002)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » IiTokyo Blues